Dopamine D2 receptors နှင့် striatopallidal စွဲလမ်းမှုနှင့်အဝလွန်မှုတွင် (၂၀၁၃) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
စွဲလမ်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက် Dopamine D2 receptors နှင့် striatopallidal ဂီယာ (2013)
Curr Opin Neurobiol ။ 2013 မေလ 28 ။ pii: S0959-4388 (13) 00101-3 ။ Doi: 10.1016 / j.conb.2013.04.012 ။
Kenny PJ, Voren, G, ဂျွန်ဆင် pm တွင်.
အပြုအမူနှင့်မော်လီကျူးအာရုံကြောသိပ္ပံ, Molecular ဟော်မုန်းဦးစီးဌာနကို The Scripps Research Institute မှ, ဂျူပီတာ, FL 33458, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ဓာတ်ခွဲခန်း; အာရုံကြောသိပ္ပံဦးစီးဌာနကို The Scripps Research Institute မှ, ဂျူပီတာ, FL 33458, အမေရိကန်နိုင်ငံ, သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ Kellogg ကျောင်း, အဆိုပါ Scripps Research Institute မှ, FL, USA ။ အီလက်ထရောနစ်လိပ်စာ: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အဆိုပါရောဂါအားဖြင့်ညှဉ်းဆဲသောသူတို့ကိုမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အစားအစာစားသုံးမှုကန့်သတ်မယ့်အလိုဆန္ဒသေးအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကြားမှဆက်လက်ဖော်ပြကြောင်းမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းရှယ်ယာအဓိကအင်္ဂါရပ်. သက်သေအထောက်အထားထွန်းသစ်စကဤပုံမမှန်သတ်မှတ်ပါတယ်သော compulsive ဘုံနောက်ခံ neurobiological ယန္တရားများအနေဖြင့်အနည်းဆုံးအချို့ဒီဂရီမှထစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ အထူးသဖြင့်, နှစ်ဦးစလုံးရောဂါ (D2R) availabilit လျော့နည်းသွား striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်yဖွယ်ရှိသူတို့ရဲ့လျော့နည်းသွားရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်စကားရပ်ထင်ဟပ်။ striatum တွင် D2R များကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အလယ်အလတ် spiny projection neuron (MSNs)၊ 'သွယ်ဝိုက်' လမ်းကြောင်း၏ striatopallidal neuron များမှဖော်ပြသည်။ D2R များကို dopamine ဆိပ်ကမ်းများနှင့် cholinergic interneurons များ၌လည်းကြိုတင်ဖော်ပြထားသည်။ ဤ D2R ဖော်ပြမှု၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုတွင်သူတို့၏ပါဝင်မှုကိုနားလည်ရန်ရိုးရာဆေးဝါးဗေဒနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ကြိုးပမ်းမှုများကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။
သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှု manipulate မှ optogenetic နှင့် chemicogenetic tools တွေကိုမှ coupled အာရုံခံ၏ discrete လူဦးရေပစ်မှတ်ထားဖို့မျိုးရိုးဗီဇနည်းပညာပေါ်ပေါက်ရေး, compulsive မှ striatopallidal နှင့် cholinergic ပံ့ပိုးမှုများကိုခွဲစိတ်ရန်နည်းလမ်းပေးထားပါပြီ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုအတွက်အချက်ပြ striatal D2R များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍထောက်ပံ့မကြာသေးမီကအထောက်အထားများကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ ကျနော်တို့ striatopallidal projection အာရုံခံခြင်းနှင့်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးများတုံ့ပြန် compulsive ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍမှအထူးအာရုံစိုက်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ဦး heuristic အဖြစ်စွဲလမ်း၏လူသိယန္တရားများ အသုံးပြု. အနာဂတ်အဝလွန်ခြင်းသုတေသနအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းမှ၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးမှုများကိုနားလည်ရန် striatal အာရုံခံ၏တိကျသောလူဦးရေ၏လှုပ်ရှားမှု manipulate အသစ် tools တွေကိုပြုကြရန်တွန်းအားပေး။
ရုန်းကန်နှင့်၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်သူကိုအဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အစားအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့၏ဆုံးရှုံးမှု [မူးယစ်ဆေးစွဲလေ့လာသည့် compulsive မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေမှများစွာသောအရိုအသေအတွက်ဆင်တူသည်1,2] ။ ဤအတူညီအပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်အလားတူသို့မဟုတ်ပင် homologous ယန္တရားများ [ဤအ compulsive အပြုအမူတွေကိုအထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းတွေးဆထားသည်1,3-6] ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ dopamine D2 အဲဒီ receptor (D2R) ရရှိနိုင်မှု [တစ်ဦးချင်းစီအမှီမှအဝလွန်ဆွေမျိုးများ၏ striatum အတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်နိမ့်ကြောင်းထူထောင်ခဲ့ကြ7 ••, 8 ••, 9] ။ D2R ရရှိနိုင်မှုတွင်ပုံစံတူစာပိုဒ်လိုငွေပြမှုမှာလည်း [ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမမှန်ခံစားနေရပြီးသူတို့အားတွေ့ရှိကြသည်10-12] ။ ယင်းသိုတစ်ဦးချင်းစီ Taqအဆိုပါ allele တင်ဆောင်လာသောမဟုတ်သူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ် striatal D1Rs အတွက် ~ 30-40% လျှော့ချရေးအတွက်ရလဒ်များအရာအိုဝါ A2 allele [13-15], [အဝလွန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-မှီခိုလူဦးရေအတွက် Over-ကိုယ်စားပြုများမှာ7 ••, 8 ••, 9, 16-18] ။ ထို့ကွောငျ့အ striatal D2Rs မြားတှငျပွောငျးလဲအလားအလာအသီးသီး, အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစွဲထဲမှာပေါ်ပေါက်ရေး compulsive စားသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။
စွဲလမ်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက် Dopamine D2 receptors
မကြာသေးခင်ကကျနော်တို့ဖိနှိပ်သက်ရောက်မှုပြစ်ဒဏ် (သို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်ခန့်မှန်းတွေကို) မှခံနိုင်ရည်ကြောင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောကဲ့သို့နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး hyperphagia နှင့်အလွန်အကျွံအလေးချိန်အမြတ်ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအသောက်များတွင်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူကြွက်များတွင်ပေါ်ထွက်လာ။ ကျနော်တို့အများကြီးကြွက်များတွင်အဝလွန်ခြင်းသွေးဆောင်ရာထိုကဲ့သို့သော cheesecake နှင့်ဘေကွန်အဖြစ်စီးပွားဖြစ်အများဆုံးကော်ဖီဆိုင်မှာမရရှိနိုင်ပါနှင့်လူ့စားသုံးမှုများအတွက်စက်တွေတော့အရောင်းအလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့စွမ်းအင်သိပ်သည်းအစားအသောက်ထုတ်ကုန်၏ရွေးချယ်ရေးပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦး "ကော်ဖီဆိုင်အစားအသောက်များတွင်" မှနီးပါးန့်အသတ်နေ့စဉ်အသုံးပြုခွင့်နှင့်အတူကြွက်ပေးအပ် သူတို့ရဲ့လူ့ equivalents ကြွက်နှင့်တူ [19,20] ။ ဤအကြွက်များအလေးချိန်ရရှိခဲ့သည့်အတိုင်းသူတို့ဆန္ဒရှိ footshock စတင်ခြင်းခန့်မှန်းတွေကိုနှိပ်ကွပ်နေတာတွေကိုသက်ရောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ဖွစျကွောငျးစားအပြုအမူသရုပ်ပြ [21 ••] ။ အလားတူ compulsive ကဲ့သို့စားသုံးမှုမူးယစ်ဆေးထပ်တိုးခွင့်တဲ့ကာလအပြီးတွင်ကင်းပြုတ်ရည်များအတွက်တုံ့ပြန်ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည် [22,23 ••].
Iသူတို့ရဲ့အလွန်အကျွံ adiposity နှင့် compulsive ကဲ့သို့စားလောက်ဎများအပြင်, ကော်ဖီဆိုင်အစားအသောက်များတွင်ကြွက်လည်း striatum အတွက် D2Rs စကားရပ်လျော့နည်းသွားခဲ့သည် [21 ••]. ထိုကြောင့်ငါတို့သည် striatal D2Rs ၏ knockdown ကော်ဖီဆိုင်အစားအသောက်များတွင်ကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောကဲ့သို့စားသုံးမှု၏ပေါ်ပေါက်ရေးအရှိန်အဟုန်မြှင့်နိုင်ခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်။ lentivirus retrograde သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အလွန်နိမ့်နှုန်းခြင်းကိုသည်းခံကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, ဒီချဉ်းကပ်နည်း [postsynaptic အဆိုပါ striatum အတွက်အာရုံခံအပေါ် D2Rs မဟုတ်, dopamine သွင်းအားစုအပေါ် presynaptically တည်ရှိသောသူများ, ကြှနျုပျတို့သညျဤခြယ်လှယ်ခြင်းဖြင့်ထိခိုက်စေသည်ရရှိနိုင်မည်21 ••] ။ Striatal D2R knockdown အမှန်ပင်ကယ်လိုရီသိပ်သည်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ compulsive ကဲ့သို့စားသုံးမှုပေါ်ပေါက်ရေးအရှိန်။ သို့သော် striatal D2R knockdown compulsive ပေါ်ထွက်လာမတိုင်မီတိရိစ္ဆာန်များ D2R knockdown နှင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှပင်အလွန်ကန့်သတ်ထိတွေ့ပေါင်းစပ်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ကြရသည်ကြောင်းအကြံပြု, စံ Chow များအတွက်တုံ့ပြန် compulsive ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး [21 ••] ။ အံ့သြစရာကောင်းတာကမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏ compulsive ကဲ့သို့ပုံစံများအပေါ် striatal D2R အချက်ပြကမောက်ကမဖြစ်စေရန်၏သက်ရောက်မှုသေးအကဲဖြတ်ကြပြီမဟုတ်။
ကျောင်းအုပ်ကြီး MSN ကို projection အာရုံခံအဆိုပါ striatum အတွက်အာရုံခံ၏ 90-95% အကြားအဘို့အကောင့်။ ဒီစရိုက်လက္ခဏာတွေနီးပါးဆက်ဆက် over-ရိုးရှင်းလွယ်ကူတာ striatal MSNs ၏ဆက်သွယ်မှု၏ဖြစ်သော်လည်းအဆိုပါ MSNs ယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်ခု discrete လူဦးရေသို့ segregated နေကြတယ်, တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအာရုံခံချေါ; ဥပမာအားဖြင့်, Refs ကြည့်ပါ။ [24-26] ။ T ကသူ striatum မှတိုက်ရိုက်ကိုလည်း striatonigral အာရုံခံအဖြစ်လူသိများတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း MSNs, အမြန် dopamine D1 receptors (D1Rs) နှင့်စီမံကိန်းသည် substantia nigra reticulata ဆန်းစစ်မှုမှ (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏) နှင့် globus pallidus (GPI) ၏ပြည်တွင်းရေးအစိတ်အပိုင်း. ထို့အပြင်အဆိုပါ globus pallidus (GPe) ၏ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းနှင့် subthalamic နျူကလိယ (STN) မှတဆင့် striatum ထံမှဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ / GPI မှသွယ်ဝိုက် striatopallidal အာရုံခံ, အမြန် D2Rs နှင့်စီမံကိန်းအဖြစ်လူသိများအဆိုပါသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း MSNs ။
အဆိုပါ striatopallidal အာရုံခံတစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက် inhibitory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုသော်လည်း striatonigral အာရုံခံ၏ activation ယေဘုယျအားဖြင့်, ရှေ့ဆက် locomotor အပြုအမူတွေကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ အဆိုပါ striatopallidal အာရုံခံအပြင်, striatum အတွက် cholinergic interneurons လည်း D2Rs ဖော်ပြ [27, 28 ••, 29] ။ striatum အတွက် D2R စကားရပ်၏ဤသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော D2Rs compulsive မူးယစ်ဆေးနှင့်အစားအစာစားသုံးမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါအရာအားဖြင့်ယန္တယားကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြိုးစားမှုရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော optogenetics အဖြစ် Cre-ဖော်ပြအာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်ဖို့ Cre-မှီခိုနည်းစနစ်များပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်အတူ coupled အာရုံခံ၏သတ်မှတ်လူဦးရေအတွင်း Cre recombinase ဖော်ပြကြောင်းကြွက်၏သို့သော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, [30 •] နှင့်သီးသန့်ဒီဇိုင်နာမူးယစ်ဆေးဝါး (DREADDs) က activated ဒီဇိုင်နာ receptor [31,32 •] မူးယစ်ဆေးနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုမှ striatal ဆဲလ်များ၏တိကျသောလူဦးရေရဲ့အလှူငွေသတ်မှတ်ပေးရန်စတင်နေပါတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ဤဝတ္ထုချဉ်းကပ်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ကြိုးဂုဏ်သတ္တိများဆန့်ကျင်, စအစားအစာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုတရားရှိဖို့, compulsive ကဲ့သို့ပုံစံများပေါ်ပေါက်ရေးဆန့်ကျင်ဖို့ striatum အတွက် D2-ဖော်ပြအာရုံခံ၏သော့ချက်ပံ့ပိုးမှုများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
Striatopallidal အာရုံခံသော်လည်းမ cholinergic interneurons adenosine 2A receptors (A2AR) ဖော်ပြ။ ဤအချက်ကိုအခြေခံပြီး Durieux နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ striatopallidal အာရုံခံအတွက် (DTR) တွင်ဆုံဆို့အဆိပ်အတောက်အဲဒီ receptor ၏စကားရပ်မောင်းထုတ်ရန် A2AR-Cre ကြွက်တွေကိုသုံး, နောက်ပြီးအဲဒီအာရုံခံ၏မြင့်မားတိကျတဲ့တွေ့ရှိရပါသည်သွေးဆောင်ဖို့ဆုံဆို့အဆိပ်အတောက်နှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များထိုးသွင်း [33 ••] ။ ဤသည်ကိုင်တွယ်လေးနက်တဲ့ hyperlocomotion နှင့်စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုတစ်ဦးသိသိသာသာတိုးဖြစ်ပေါ် [33 ••] ။ Lobo နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနောက်ပိုင်းတွင် Tropomyosin-related kinase B က (TrkB) ၏ပစ်မှတ်ထားဖျက်မှု, ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotropic အချက် (BDNF) အတွက်အဲဒီ receptor, striatonigral အတွက်ကင်းဆုလာဘ်တိုးမြှင် D2-ဖော်ပြ MSNs အတွက် TrkB နောက်ကောက်သော်လည်း, ကိုကင်းများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများလျော့ကြောင်းအစီရင်ခံ [34 ••] ။ ထိုမှတပါး, D2-ဖော်ပြ MSNs အတွက် TrkB နောက်ကောက် [ဤအအာရုံခံအလားတူကင်းဆုလာဘ်လျော့ကျလာဒီ optogenetic ဆွနှင့်အတူသူတို့၏စိတ်လှုပ်ရှားတိုးလာ34 ••] ။ မကြာသေးမီက Neumeier နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ striatopallidal အာရုံခံ၏တားစီး [ာင်းမြှင့်တင်ရန်သော်လည်း, စိတ်ကြွဆေးမှထိခိုက် locomotor တုံ့ပြန်မှုများပေါ်ပေါက်လာပိတ်ဆို့ striatonigral အာရုံခံ၏တားစီးပြသရန် DREADDs ကိုအသုံးပြု35 •] ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် striatopallidal အချက်ပြဆုလာဘ်-related ဖြစ်စဉ်များဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်စွဲ-သက်ဆိုင်ရာ neuroplasticity ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဖြစ်နိုင်ဖွယ် compulsive ပေါ်ပေါက်ရေးမောင်းသောနှောင့်အယှက် - ထိုအပြုအမူအတွက်မွဲအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေမည်သည့်အခါတုံ့ပြန်ငြိမ်းနိုင်စွမ်း - လတ်တလောတွေ့ရှိချက်တုံ့ပြန် "ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်" တွင် striatopallidal အချက်ပြပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပါပြီ။ Kravitz နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ striatopallidal အာရုံခံ၏ optogenetic ဆွဟာ optical ဆွ၏ရှောင်ရှားခြင်းတွင်ထင်ဟပ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကဲ့သို့တုံ့ပြန်မှုအတွက်ရလဒ်တွေ့ရှိခဲ့ [36 •] ။ neurotransmitter လွှတ်ပေးရန်ပိတ်ဆို့ဖို့မေးခိုင်အဆိပ်အတောက်၏ဆဲလ်-တိကျတဲ့စကားရပ်ကိုသုံးပြီး, Nakanishi နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ [striatopallidal အချက်ပြ၏နှောင့်အယှက်တစ်ခု inhibitory ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူ (လျှပ်စစ် footshocks ကိုအပ်ခဲ့ပြီးသောအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်၏ရှောင်ရှားခြင်း) သင်ယူဖို့တိရိစ္ဆာန်များ၏စွမ်းရည်ကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းတွေ့ရှိရ37 ••] ။ ဒီတူညီတဲ့မေးခိုင်အဆိပ်အတောက်-based ချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးပြီး, Nakanishi နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်လည်း [striatopallidal ဂီယာ၏နှောင့်အယှက်သူတို့သတိပေးတာဝန်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့တုန့်ပြန်မှာသူတို့ရဲ့အပြုအမူပြောင်းလဲပစ်နိုင်ခဲ့ပါသောကြွက်များတွင်တရားရှိဖို့ကဲ့သို့သောအပြုအမူသွေးဆောင်တွေ့ရှိခဲ့38] ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်သောဆုလာဘ်အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်ဖို့နိုင်ရန်အတွက်အဆောက်အဦးများကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်မဟာဗျူဟာများအကြား switching အဓိကအခန်းကဏ္ဍအမူအကျင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထိန်းညှိအတွက် striatopallidal အာရုံခံများအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ကိုက်ညီများမှာ . ထို့ကြောင့်သူတို့၏လျော့နည်းသွားလှုပ်ရှားမှုအတွက်ရလဒ်များကြောင့် striatopallidal အာရုံခံအတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် plasticity အလားအလာမူးယစ်ဆေး-ယူပြီးအပြုအမူ၏တရားရှိဖို့, compulsive-ကဲ့သို့ပုံစံများ precipitate နိုင်ဘူး။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေနှင့်အတူတသမတ်တည်း, Alvarez နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မကြာသေးမီကနျူကလိယ accumbens အတွက် D2-ဖော်ပြ MSNs ပေါ်သို့ခိုင်ခံ့စေကြောင်း Synaptic ပြသကြသွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်တွေမှာဖြစ်ပေါ် [39 ••] ။ ဤသည် Synaptic အားကောင်းပြောင်းပြန် [compulsive ကဲ့သို့ကင်းတုံ့ပြန်ပေါ်ပေါက်ရေးဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်39 ••] ။ ထိုမှတပါး, striatopallidal အာရုံခံ၏ DREADD-mediated တားစီး, ဒါမှမဟုတ် optical ဆွ [compulsive ကဲ့သို့ကြွက်တွေမှာကင်းများအတွက်တုံ့ပြန်, အသီးသီးတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့နည်းသွား39 ••].
Striatopallidal ဂီယာနှင့် compulsive စား
These အထက်တွင်တွေ့ရှိချက် D2- တုံ့ပြန် compulsive ကင်းအတွက် MSNs ဖော်ပြဘို့အဓိကအခန်းကဏ္ဍ၏ထောက်ခံမှုအတွက်တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားများကိုပေး။ ဤသည် striatopallidal အာရုံခံလည်းအဝလွန်ခြင်းအတွက်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ compulsive စားသုံးမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ရှိမရှိ၏အရေးကြီးသောမေးစရာများရှိနေပါသည်။ အံ့သြစရာကဒီဖြစ်နိုင်ခြေမရှိသေးပါစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေနှင့်ဤသိကျွမ်းခြင်း၌အဓိကကွာဟချက်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေဤအချက်ကိုအတွက်အမှုဖြစ်မည်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်အရိပ်အမြွက်ရှိပါတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း A2ARs ထူထပ် [striatopallidal အာရုံခံဖော်ပြကြသည်40] ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, A2AR လှုပ်ရှားမှု modulate ကြောင်း pharmacological အေးဂျင့်ဦးစား [striatopallidal ဂီယာကိုတိုးမြှင့်ပေးသော striatopallidal ဂီယာ A2AR agonists, ကြွက်များတွင်အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့များနှင့်စံ Chow နှစ်ဦးစလုံး၏လျှော့ချစားသုံးမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်မျှော်လင့်နေကြသည်41] နှင့်လျှော့လီဗာ-နှိပ်အစားအစာဆုလာဘ်များအတွက်  ။ ပြောင်းပြန် A2A receptors ၏ pharmacological ပိတ်ဆို့ [တစ်ဦးတည်းအုပ်ချုပ်သည့်အခါအရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုတိုးပွားလာနှင့်μ-opioid အဲဒီ receptor agonist (DAMGO) ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်အစပျိုးအရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုတိုးမြှင့်43] ။ T ကhese တွေ့ရှိချက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်အပေါ်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းဆွ၏ inhibitory သက်ရောက်မှုများဆင်တူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, D2-ဖော်ပြသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း MSNs သူတို့မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ထိန်းညှိတာတူညီသောလမ်းအတွက်အစားအစာစားသုံးမှုထိန်းညှိခြင်းအလိုငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အထက်ပါတွေ့ရှိချက်များမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတာရှညျသို့မဟုတ်ကိုယ်အလေးချိန်သဘာဝတဖြည်းဖြည်းပိုပြီး compulsive ဖြစ်လာကြောင်းစားသုံးမှု၏တရားရှိဖို့ပုံစံများအတွက်ရရှိလာတဲ့, striatopallidal အာရုံခံအတွက်သပ္ပါယ်တုံ့ပြန်မှုမောင်းရသောတစ်ဦးဆက်စပ်မူဘောင်ထောက်ခံပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, အဝလွန်ခြင်းသုတေသနအတွက်အနာဂတ်လှုပ်ရှားမှု၏အဓိကဧရိယာ compulsive စားပေါ်ပေါက်ရေးထိန်းညှိအတွက် striatopallidal အာရုံခံများအတွက်တိကျသောအခန်းကဏ္ဍ defining ခံရဖို့ဖွယ်ရှိသည်။ တရားရှိဖို့စား၏ဤအမျိုးအစား ameliorating ရေရှည်ကိုယ်အလေးချိန်အောင်မြင်ရန်ထိရောက်သောနည်းဗျူဟာများ၏အခြေခံဖွဲ့စည်းလျှင်ဒါဟာအစဆုံးဖြတ်ရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ နှစ်ဦးစလုံးဟာစွဲလမ်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းနယ်ပယ်များတွင်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖွယ်ရှိသုတေသန၏နောက်ထပ်ဧရိယာ cholinergic interneurons ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး D2 receptors များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ defining ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။ striatum အတွက် cholinergic interneurons ၏ optical တားစီး [ကင်း၏အကြိုးသက်ရောက်မှု abolishes44] ။ cholinergic interneurons အပေါ် D2 receptors [dopamine ဆိပ်ကမ်းအပေါ် presynaptically တည်ရှိသောနီကိုတင်း acetylcholine receptors (nAChRs) နဲ့ interaction ကတဆင့်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်တွင်ဤဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်၏ဝိသေသခေတ္တနား-burst ပုံစံများကိုထိန်းညှိ28] ။ မူးယစ်ဆေးထပ်တိုးခွင့်နှင့်အတူကြွက်များတွင်ကင်းစားသုံးမှု၏ nAChRs လုပ်ကွက် compulsive ကဲ့သို့တင်းမာမှု၏စိတ်ဝင်စားစရာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း  ။ striatal cholinergic interneurons အတွက်အချက်ပြ D2 အဲဒီ receptor ကိုလည်း compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူကိုအထောက်အကူပြုရန်မယ်ဆိုရင်ဒါကွောငျ့ကဆုံးဖြတ်ရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
striatum အတွက်လျော့နည်းသွား D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစွဲရလဒ်။
D2 receptors compulsive စားထိန်းချုပ်ထားသည်။
DREADDs နှင့် optogenetics compulsive မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက် striatopallidal အာရုံခံများအတွက် key ကိုအခန်းကဏ္ဍထင်ရှားပါပြီ။
ဤလုပ်ငန်းကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (PJK မှ DA020686) ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကနေထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံခဲ့သည်။ ဤသည်အဆိုပါ Scripps Research Institute မှဆီကနေလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အရေအတွက်ကို 23035 ဖြစ်ပါတယ်။
1 ။ Baicy K. Can အစားအသောက်စွဲလမ်းဖြစ်? neuroimaging နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကုသမှုနှင့်သုတေသနကနေအဝလွန်အပေါ် Insights ။ အာဟာရမှတ်သားဖွယ်။ 2005; 7:4။
2 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးစားသုံးမိအပြုအမူအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ အစာစားချင်စိတ်။ 1997; 28: 1-5 ။ [PubMed]
3 ။ Volkow ND, ပညာရှိ RA ။ ဘယ်လိုမူးယစ်ဆေးစွဲကျွန်တော်တို့ကိုအဝလွန်ခြင်းကိုနားလည်ကူညီပေးနိုငျသနညျး နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 555-560 ။ [PubMed]
4 ။ ကယ်လီ AE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများမှဆက်စပ်မှု: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်၏ neuroscience ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 3306-3311 ။ [PubMed]
5 ။ Kenny PJ ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမှာကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2011; 12: 638-651 ။ [PubMed]
6 ။ Kenny PJ ။ အဝလွန်ခြင်းအတွက်ဆုလာဘ်ယန္တရားများ: သစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနှင့်အနာဂတ်လမ်းညွန်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2011; 69: 664-679 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7. Stice အီး, Spoor S က, Bohon ကို C, အသေးစား DM ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစားအစာမှတုံး striatal တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်ဆံရေး TaqIA A1 allele အားဖြင့်တည်းဖြတ်သည်။ သိပ္ပံ။ 2008; 322: 449-452 ။ [PubMed] ••ဒီအရေးကြီးသောစာရွက် striatal D2 အဲဒီ receptor အချက်ပြရေရှည်ကိုယ်အလေးချိန်ဖို့အရေးပါတယ်လို့စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အားနည်းချက်မှ hedonic တုံ့ပြန်မှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားကြီးသောအထောက်အထားပေးပါသည်။
8. ဝမ် GJ, Volkow ND, Logan J ကို, Pappas ရော်ဘာ, Wong ကမှန် CT, Zhu W က, Netusil N ကို, မုဆိုး JS ။ ဦးနှောက် dopamine နှင့်အဝလွန်ခြင်း။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet ။ 2001; 357: 354-357 ။ [PubMed] ••တစ်ဦးကဟောပြောမှုတွေစက္ကူ striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုပိန်ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အဝလွန်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အနိမ့်ခဲ့ကြောင်းဆန္ဒပြ။
9 ။ Barnard ND, Noble EP, Ritchie T က, Cohen ကိုဂျေ, Jenkins DJ သမား, Turner-McGrievy, G, Gloede L ကို, အစိမ်းရောင် AA ကို, Ferdowsian အိပ်ချ် D2 dopamine အဲဒီ receptor Taq1A polymorphic, ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါအတွက်အစားအသောက်စားသုံးမှု။ အာဟာရ။ 2009; 25: 58-65 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ Asensio S က, ရိုမီယို MJ, ရိုမီယို FJ, Wong ကနေ C, Alia-Klein N ကို, Tomasi: D, ဝမ် GJ, Telang က F, Volkow ND, စတိန်း RZ ။ Striatal dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုတို့သည် thalamic ဟောကိန်းထုတ်သုံးနှစ်အကြာတွင်ကင်းချိုးဖောက်ဆုချမှ prefrontal တုံ့ပြန်မှု medial ။ synapses ။ 2010; 64: 397-402 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
11 ။ et al Volkow ND, Chang က L ကို, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Ding YS, Sedler M က, Logan J ကို, Franceschi: D, Gatley J ကို, Hitzemann R ကို။ စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများဦးနှောက် dopamine D2 receptors ၏အနိမ့်အဆင့်: အ orbitofrontal cortex အတွက်ဇီဝြဖစ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158: 2015-2021 ။ [PubMed]
12 ။ Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Hitzemann R ကို, Logan J ကို, Schlyer DJ သမား, Dewey SL, Wolf က AP ။ dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းချိုးဖောက်လျှော့တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သည်လျော့သွားသည်။ synapses ။ 1993; 14: 169-177 ။ [PubMed]
13 ။ Stice အီး, Yokum S က, Bohon ကို C, Marti N ကို, Smolen အေဆုကြေး circuitry Response အစားအစာမှခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုအတွက်အနာဂတ်တိုးဟောကိန်းထုတ်: DRD2 နှင့် DRD4 ၏စိစစ်ဆိုးကျိုးများ။ Neuroimage ။ 2010; 50: 1618-1625 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ Ritchie T က, Noble EP ။ ဦးနှောက်အဲဒီ receptor-binding ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ D2 dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇခုနစ် polymorphic ၏အသင်းမှ။ Neurochem Res ။ 2003; 28: 73-82 ။ [PubMed]
15 ။ Jonsson ဥပမာ Nothen MM, Grunhage က F, Farde L ကို, Nakashima Y ကို, ကျားကန် P ကို, Sedvall GC ။ အဆိုပါ dopamine D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း striatal dopamine အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးအတွက် polymorphic ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 4: 290-296 ။ [PubMed]
16 ။ Noble EP, Zhang က X ကို, Ritchie TL, Sparks သည် RS ။ အဆိုပါ DRD2 locus နှင့်ပြင်းထန်သောရက်မှာ Haplotypes ။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ။ 2000; 96: 622-631 ။ [PubMed]
17 ။ Noble EP, Blum K ကို Khalsa ME, Ritchie T က, Montgomery တစ်ဦးက, et al Wood က RC, Fitch RJ, Ozkaragoz T က, Sheridan PJ, Anglin MD ။ ကိုကင်းမှီခိုအတူ D2 dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇ၏ Allelic အသင်းအဖွဲ့။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1993; 33: 271-285 ။ [PubMed]
18 ။ Lawford BR, Young က RM, Noble EP, Sargent J ကို, Rowell J ကို, Shadforth S က, Zhang က X ကို, Ritchie တီအဆိုပါ: D (2) dopamine အဲဒီ receptor တစ်ဦးက (1) allele နှင့် opioid မှီခို: ဘိန်းဖြူအသုံးပြုခြင်းနှင့် methadone ကုသမှုကိုတုံ့ပြန်တွေနဲ့ပေါင်းသင်း။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ။ 2000; 96: 592-598 ။ [PubMed]
19 ။ Sclafani တစ်ဦးက, အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် Springer ဃအစားအသောက်အဝလွန်ခြင်း: hypothalamic နှင့်လူ့အဝလွန်ခြင်း syndrome မှတူညီ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1976; 17: 461-471 ။ [PubMed]
20 ။ Rothwell NJ, စတော့အိတ် MJ ။ အောက်စီဂျင်စားသုံးမှုနှင့်ကြွက် [တရားစွဲဆိုမှု] J ကို Physiol အတွက် noradrenaline sensitivity ကိုအနားယူခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အပေါ်အစာကျွေးကော်ဖီဆိုင်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ရပ်စဲကာလဆိုးကျိုးများ။ 1979; 291: 59P ။ [PubMed]
21 ။ ဂျွန်ဆင် pm တွင်, Kenny PJ ။ အဝလွန်ကြွက်များတွင်စွဲတူသောဆုလာဘ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် compulsive စား Dopamine D2 receptors ။ နတ် neuroscience ။ 2010; 13: 635-641 ။ [PubMed] ••ဤစာတမ်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာစား၏ compulsive ကဲ့သို့ပုံစံများသွေးဆောင်နိုင်သည်ကိုပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားအချို့ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
22 ။ Pelloux Y ကို, Everitt BJ, ပြစ်ဒဏ်အောက်မှာကြွက်များကရှာကြံ Dickinson အေ compulsive မူးယစ်ဆေး: သမိုင်းယူပြီးမူးယစ်ဆေး၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 194: 127-137 ။ [PubMed]
23 ။ Vanderschuren LJ, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးရှာအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1017-1019 ။ [PubMed] ••ဤစာတမ်း, ပြစ်ဒဏ်သို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်ခန့်မှန်းတွေကိုခံနိုင်ရည်သောကြောင့်စွဲတူသောကင်းများအတွက်တုံ့ပြန်ထူထောင်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ယခု compulsive စားအကဲဖြတ်ရန်ဖို့အသုံးပြုနိုင်သည့်ကြွက်များတွင်ကင်းများအတွက်တုံ့ပြန် compulsive ၏အစီအမံ, operationalize မှဝတ်ပြုကြ၏။
24 ။ Smith က RJ, Lobo MK, Spencer က S, Kalivas PW ။ D1 နှင့် D2 အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် projection အာရုံခံ (တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းနှင့်အတူသေချာပေါက်ပြောရလျှင်မ dichotomy) Curr Opin Neurobiol accumbens ။ 2013 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25. Perreault ML, Hasbi A, O'Dowd BF, George SR ။ striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် dopamine d1-d2 အဲဒီ receptor heteromer: Basal Ganglia အတွက်တတိယကွဲပြားအာရုံခံလမ်းကြောင်းများအတွက်သက်သေအထောက်အထား။ Neuroanat ရှေ့။ 2011; 5: 31 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ Thompson က RH အ, Swanson LW ။ hypothesis-မောင်းနှင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဦးနှောက်ဗိသုကာ၏ hierarchical မော်ဒယ်ကျော်ကွန်ယက်ကိုထောက်ခံပါတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2010; 107: 15235-15239 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27 ။ Goldberg ဂျာ Ding JB, Surmeier DJ သမား။ striatal function ကိုနှင့် circuitry ၏ Muscarinic မော်ဂျူ။ Handb Exp Pharmacol ။ 2012: 223-241 ။ [PubMed]
28 ။ ding JB, Guzman ဖြစ်မှု, Peterson JD, Goldberg ဂျာ Surmeier DJ သမား။ cholinergic interneurons အားဖြင့် corticostriatal အချက်ပြ၏ Thalamic Gates ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010; 67: 294-307 ။ [PubMed] • striatum အတွက် cholinergic interneurons ၏လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်အတွက်, dopamine D2 receptors များအတွက်အခန်းကဏ္ဍသတ်မှတ်ပါတယ်နှင့်နီကိုတင်း receptors နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ interaction က။
29 ။ Dawson VL, Dawson TM, Filloux FM ရေ, Wamsley JK ။ dopamine D-2 အဘို့သက်သေအထောက်အထားကြွက် caudate-putamen အတွက် cholinergic interneurons အပေါ် receptors ။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1988; 42: 1933-1939 ။ [PubMed]
30 ။ Boyden ES, Zhang က F ကို, Bamberg အီး, Nagel, G, Deisseroth K. မီလီစက္ကန့-timescale, အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု၏မျိုးရိုးဗီဇလျာထားသော optical ထိန်းချုပ်မှု။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1263-1268 ။ [PubMed] optogenetically အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေထူထောင်ကူညီတစ်ဦးကယခုဂန္စက္ကူ•။
31 ။ Armbruster BN, Li က X ကို, Pausch သည် MH, Herlitze S က, Roth BL ။ အစွမ်းထက်အာဂွန် ligand အားဖြင့် activated, G ပရိုတိန်း-coupled receptors တစ်မိသားစုကိုဖန်တီးရန်သော့ချက် fit မှသော့ခတ်ဖြစ်ပေါ်နေသော။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2007; 104: 5163-5168 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32 ။ အလက်ဇန်းဒါး GM က, Rogan SC, ဘတ်စ် AI အ, Armbruster BN, pei Y ကို, Allen ကဂျာ Nonneman RJ, Hartmann J ကို, Moy အက်စ်အက်စ်, Nicolelis MA, et al ။ ပြောင်းလဲ, G ပရိုတိန်း-coupled receptors ဖော်ပြ Transgene ကြွက်တွေမှာအာရုံခံလှုပ်ရှားမှု၏ remote control ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009; 63: 27-39 ။ [PubMed] အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်ဘို့ DREADD နည်းပညာများ၏ထိရောက်မှုကိုထူထောင်တစ်ဦးက key ကိုစက္ကူ•။
33 ။ Durieux PF, Bearzatto B, Guiducci S, Buch T, Waisman A, Zoli M, Schiffmann SN, de Kerchove d'Exaerde A. D2R striatopallidal neuron များသည် locomotor နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုိုင်ရာဖြစ်စဉ်နှစ်ခုလုံးကိုတားစီးသည်။ နတ်နေရာသစ်။ 2009; 12: 393-395 ။ [PubMedstriatopallidal အာရုံခံထိထိရောက်ရောက် lesioned သူတို့မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တခုတခုအပေါ်မှာ inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်သောပထမဦးဆုံးဆန္ဒပြပွဲများ၏] ••တစ်ခုမှာ။
34 ။ Lobo MK, Covington သူ, 3rd, Chaudhury: D, Friedman AK Sun, H ကို, et al Damez-Werno: D, Dietz DM, ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့သမ္မတအိုဘားမားလွှတ်တော်မှာ S က, Koo JW, ကနေဒီ PJ ။ တူတဲ့ကင်းဆုလာဘ်၏ optogenetic ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြ BDNF ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့အရှုံး။ သိပ္ပံ။ 2010; 330: 385-390 ။ [PubMedလှုပ်ရှားမှု striatonigral နှင့် striatopallidal အာရုံခံသမ္မာသတိ optogenetics သုံးပြီးထိန်းချုပ်နိုင်သောပထမဦးဆုံးဆန္ဒပြပွဲများ၏] ••တစ်ခုမှာ။ ဒါ့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်အတွက်အာရုံခံဤနှစ်မျိုးများအတွက်ဆန့်ကျင်အခန်းကဏ္ဍမှအတည်ပြုပြီး။
35 ။ ဖာဂူဆန်သည် SM, DE, MI, Wanat MJ, Phillips က Pem သည် Dong Y ကို, Roth BL, Neumaier JF ။ ယာယီအာရုံခံတားစီးာင်းအတွက်သွယ်ဝိုက်နှင့်တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း၏အခန်းကဏ္ဍဆန့်ကျင်ဖော်ပြသည်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2011; 14: 22-24 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] • DREADDS အသုံးပြုခြင်း, တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအာရုံခံအထပ်ထပ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်စွဲ-သက်ဆိုင်ရာ neuroplasticity ၏ induction အတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်အခန်းကဏ္ဍရှိသည်ပြသခဲ့သည်။
36 ။ Kravitz AV စနစ်, Tye ld, Kreitzer AC အ။ အားဖြည့်အတွက်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း striatal အာရုံခံများအတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2012; 15: 816-819 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] •ဤစာတမ်းသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအာရုံခံပြစ်ဒဏ်နှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက်ဝှက်နှင့်ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူတွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။
37 ။ Hikida T က, Kimura K ကို Wada N ကို, Funabiki K ကို Nakanishi အက်စ်ဆုချမှတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက် striatal လမ်းကြောင်းအတွက် Synaptic ဂီယာ၏ထူးခြားသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆန္ဒရှိအပြုအမူ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010; 66: 896-907 ။ [PubMed] ••သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းရှိအာရုံခံဆဲလ်များသည်ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူများကိုထိန်းညှိကြောင်းနှင့်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ“ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်း” ကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အရေးကြီးသည်ဟူသောပထမဆုံးသက်သေအထောက်အထားအချို့ကိုပေးခဲ့သည်။
38 ။ Yawata S ကို, ယာမာဂူချီ T က, Danjo T က, Hikida T က, ဆုလာဘ်သင်ယူမှုနှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ရွေးချယ် dopamine receptors မှတဆင့်၎င်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏ Nakanishi အက်စ် Pathway-တိကျတဲ့ထိန်းချုပ်မှု။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2012; 109: 12764-12769 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
39 ။ Bock R ကို, ရှင် HJ, Kaplan AR, Dobi တစ်ဦးက, Market ကအီး, Kramer PF, Gremel CM, Christensen CH, Adrover MF, Alvarez VA သို့။ အဆိုပါ accumbal သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း Strenghtening compulsive ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းမှခံနိုင်ရည်အားပေးအားမြှောက်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2013 အဆင့်မြင့်အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှု။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMedstriatopallidal အာရုံခံ compulsive ကဲ့သို့ကင်းများအတွက်တုံ့ပြန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲမှအားနည်းချက်ထိန်းညှိကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းသည်လယ်ပြင်၌တစ်ဦး key ကိုထုတ်ဝေဖြစ်] ••ဖှယျရှိသညျ။
40 ။ Schiffmann SN, Fisone, G, Moresco R ကို, Cunha RA, Ferre အက်စ် Adenosine A2A receptors နှင့် Basal ganglia ဇီဝြဖစ်စဉ်။ prog Neurobiol ။ 2007; 83: 277-292 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
41 ။ Micioni Di Bonaventura သင်္ဘော MV, Cifani ကို C, Lambertucci ကို C, Volpini R ကို, Cristalli, G, Massi အမ်တစ်ဦးက (2A) adenosine receptor agonists အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် High-အာခေါင်နှင့်အနိမ့်အာခေါင်အစားအစာစားသုံးမှုနှစ်ဦးစလုံးလျှော့ချပေးပါတယ်။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2012; 23: 567-574 ။ [PubMed]
42 ။ ဂျုံးစ်-ကေ့ကို C, Stratford TR, အ adenosine တစ်ဦးက (2) တစ်ဦးက agonist CGS-21680 နှင့်ကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်အစားအစာ-အားဖြည့်ပုံသေအချိုးအစားအပေါ် haloperidol ၏ Wirtshafter ဃ Differential ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 2012; 220: 205-213 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
43 ။ Pritchett အီး, Pardee AL, McGuirk SR, Will MJ ။ နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုဖြန်ဖြေအတွက် adenosine-opioid အပြန်အလှန် accumbens ။ ဦးနှောက် Res ။ 2010; 1306: 85-92 ။ [PubMed]
44 ။ Witten ခလရ, Lin က SC, Brodsky M က, Prakash R ကို, Diester ငါ Anikeeva P ကို, Gradinaru V ကို, Ramakrishnan က C, Deisseroth K. Cholinergic interneurons ဒေသခံဆားကစ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကိုကင်းအေးစက်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ သိပ္ပံ။ 2010; 330: 1677-1681 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
45 ။ Hansen ST, မာကုမိသားစုဆရာဝန်။ အဆိုပါနီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor ရန် mecamylamine တိုးချဲ့နေ့စဉ်အသုံးပြုခွင့်နှင့်အတူကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတင်းမာမှုကာကွယ်ပေးသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 194: 53-61 ။ [PubMed]